Masvingo mashizha mashizha mashizha, chitsvuka cheMetal mesh,Woven akasangana nemafekiri anotengesa mabhuku - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Architectural Mesh > Mhoteredzo Yepuro>Murongi WezveMesh
Usvingo hweSimbi Risina MashIri kuva yakakurumbira zvikuru zvikuru muzvivako zvazvino uno uye yazova mutoo mutsva wokumera mumakore achangobva kupfuura. Naizvozvo chii chiri rusvingo rwusimbi rweSimbi isina simba? Masvingo akasvibirira wesimbi asina mvura ndewokuti vanhu vanoshandisa mvura yetambo isina simba kudyara miti yakasvibira pamadziro kana kuti kuti inoshandisa mvura muzvivako zvikuru. Rusvingo rwushizha rwusimbi rwusimbi rwusimbi runogovera mhinduro yeushamwari yemhoteredzo uye inogara nokuda kwenyanzvi dzokugadzira nokuvaka. Vagadziri vanogona kuzadziswa kwakasiyana - siyana kwezvinhu zvitsva pakuvakwa kwezvivako vachibatsirwa nenhambo yesimbi isina simba.
Muganhu worusvingo rwusviyo
Masvingo mashizha mashizha wesimbi asina simbi anogona kupa chiverengero chikuru chebetsero chiri pasi apa:
L Zvinhu zvakanakana- Takagadzirwa nensimbi yakakwirira 316 isina simba, nhare yedu yechivandu yakasimba, yakaisvonaka asi yakareba. Izvo 100% zvinoshandiswazve, zvinonyanya kudzivisa kuparadza uye hakuna kuchengetedzwa zvishoma kana kuti hakuna kunodikanwa. Zvikurusa, inoratidza upenyu refu zvikuru kupfuura zvinhu zvakafanana mumusika.
L Chivako chenguva dzose- Birimbo yakaoma inoratidza kukwanisa kwomutorwa kwakakwirira nokudzivisa mukurwisana nemhepo yakarema nesinou. Chinogara chimiro che3D nokugovera gadziriro inoshamisa yokuchinja. Mukuwedzera, ine basa rakakwana kunyange mumamiriro okunze anopisa sezvo tsamba yacho isingapindiri kupisa.
L Betsero dzemhoteredzo dzokuiva- Inoda kutsigira mizambiringa yakasimba zvikurusa, iyo inobudisa oxygen kuderedza migumisiro yegreenhouse.
L Kudzora kudenga uye kubuda- Rinodzora tembiricha yechivako chako kupfurikidza nomumvuri wedziro, kuderedza kushandiswa kwechivako chako pamwe chete nokuderedza ruzha nenzira inobudirira.
L Betsero dzenzanga uye dzendangariro- Mashoko mashizha masimbi akasviba ane zvirimwa zvipenyu zvinobata maziso evanhu pamwe chete nokuvaita kuti vanzwe vakasununguka zvikuru.
L Mabasa akawanda- Mhizha yedu yesimbi isina simba inogona kushandiswa kuzvivako zvipi nezvipi kana kuti nzvimbo, zvakadai sebindu duku, nhandare negaraji yokupaka.
L Nyore kuvakirira- Mhizha yensimbi isina simba yakareba inoda chishoma chemvura pakuuya kukugadzwa.
L Kushanda- Gadziriro iri nyore yokusvibira inobvumira zvirimwe kudzora nokudzika. Uyezve, zvinhu zvakaisvibira zvinogona kubviswa zvishoma nokuda kwokuchengeta kwakakodzera kuchinja kwemwaka.
Mash mash green rusvingo 1
Masvingo mashizha tsvene 22
L Zvinhu zvinoshandiswa:Simbi isina simba 304, 316, 304 L ne316 L.
L Mwoyo wenzeni:1.2 mm kusvikira ku3.2 mm, uye mamwe madhora anowanikwawo.
L Kuvakwa kwetambo:7 × 7 ne7 × 19 ndizvo zvinoshandiswa zvikuru, asi 1 × 7 uye 1 × 19 zvinogoverwawo.
L Chikuru chevha: 25mm × 25mm kana kuti 76 mm × 76 mm, uye mamwe makuru anogoverwa akavakirwa pachinodikanwa chavatengi.
L Rudzi rweMesh:Simbi isina nyaya ine mvura ine mvura kana kuti mvura yesimbi isina manyu.
Mufananidzo wokuti masvingo akasviba
Tevere:Mvura Dzine Mvura
Taga: stainless steel rope mesh green wall, rope mesh, green facade,
Murongi Wezvene Unodzivirira Usvingo Hwokuvaka Zvakabudirira
Ndingatenga sei mvura yakaisvonaka yetambo?
Pamusoro pokushandiswa kwemhosva yetambe
Rutivi rwechasvibira here?
Simbi Risina simba Rine mvura Rine Mambo Akanyora
Mashoko akasvibira | Nhungamiro Yokuwedzera